Incazelo: Kuhle Los Angeles 3 itholakala inhliziyo ephapheme resort waseSpain Salou, eduze nogu idolobha Capellans futhi amakhilomitha 100 kusukela Barcelona.
Isakhiwo ehhotela, ephethwe Kuhle Amahhotela inethiwekhi siqukethe ezimbili izakhiwo esinezitezi eziyisithupha, okwakhiwa kuso ngo-1973 futhi zokugcina elilungisiwe ngo-2007.
Kutholwe eduze main ukuyothenga ezitaladini, nemishayo eziningi, zokudlela kanye kuma-nightclub, Kuhle Los Angeles kuyinto ethandwayo iholidi izinkampani abasha bonke nesithakazelo imisebenzi yangaphandle futhi nightlife ngasolwandle resort.
Amagumbi: Phakathi kwamakamelo 264 zikhona 5 amakamelo olulodwa. Zonke ezinye angazamukela esuka kubantu emibili kuya kwemine. Ingabe indinganiso, esiphakeme futhi izinombolo "lux".
Zonke amakamelo Kuhle Los Angeles 3 kwanikeza kuvulandi, air conditioning ne minibar. Esikhathini yokugezela - izesekeli eshaweni, amathawula, okugeza. Ifakwe cable TV, eqondile Ukudayela yocingo futhi elekthronikhi eliqinisekisiwe ephephile.
Aphathimenti inkonzo nsuku zonke futhi ihlanzekile. Njalo ukushintsha amathawula nelineni. Enye ingane yokuhlala khulula enikeziwe. Izilwane ezifuywayo awavunyelwe ehhotela.
Ukudla: Kunezinhlobo eziningana izinhlobo yokudla. Ungakhetha ikamelo ngaphandle ukudla, iziphe ukudla, yedwa, ukudla ezimbili noma kathathu ngosuku, kanye "zonke okufakayo". yokudlela Ihhotela sika, okuyinto ngokukhethekile European futhi izwe cuisine, akhonzwa uhlelo a-la-Carte kanye "lezitsha".
Beach: Izivakashi Engcono Los Angeles Amahhotela is ababemenyelwe City sandy beach nge ukungena khulula futhi ukhokhe sunbeds. On ibhange setha eydijithali amakamelo, nanjengezihlambi, kukhona pier ubumnandi izikebhe.
Imininingwane engeziwe: Service in the hotel imelelwa ezihlukahlukene amasevisi free futhi wakhokha.
I-Los Angeles 3 has a ithala sun, lounge nge wokubawa abantu bayisekele, ephephile, ikamelo-TV, car park, umthwalo USB. Kungenzeka ukubiza udokotela, ukuqasha imoto, exchange, ngefeksi.
On the indawo ye-ongaphandle indawo yokubhukuda nesigaba zezingane, eduze okuyinto ifakwe sunbeds mahhala futhi canopies.
Emini izivakashi ungajabulela ukuzijabulisa ogwini: diving, Ukushushuluza amanzi, isikebhe, ubumnandi izikebhe. Esikhathini ehhotela ungadlala amabhiliyade futhi table tennis. Ngezikhathi zakusihlwa, ahlele isiqophi imidlalo futhi ukusebenza zomculo.
Kungenzeka ukuba enye phakathi iholidi beach nge hambo, phakathi kwesikhathi lapho ungabona hhayi kuphela ezikhangayo of Spain, kodwa futhi ukuba bahambela izindawo zokungcebeleka eningizimu yeFrance, ezifana Nice noma Cannes.
Digest: Impendulo kusuka izivakashi, ihhotela Kuhle Los Angeles 3 - kungcono ukuhlala ehloniphekile resort ethandwa ngenani lentengo elikahle. A plus elikhulu - eduze kolwandle futhi enkabeni yedolobha. Eduze ehhotela kukhona esitolo nezindawo zokudlela eziningi.
amakamelo Ukhululekile ahlanzekile anemisila kuvulandi ethokomele nge zepulasitiki futhi itafula lapho ungakhululeka kusihlwa nge iziphuzo kanye Ungadla. Yokuhlanza ithawula ushintsho isifika nsuku zonke njalo. Amandla ehlukahlukene, inala inyama, inhlanzi fresh futhi kwasolwandle, imifino kanye inala iziphuzo. Ukuze sasekuseni nsuku wakhonza champagne futhi ikhofi okumnandi.
Ngokusho izivakashi eziningi ngoba esigabeni sayo "izinkanyezi ezintathu" ehhotela ufanelwe kokuhlaziywa "kakhulu".
"Dvina" - ihhotela oyisilomo Veliky Ustyug, kanye nezinye amahhotela yokuhlala Santa Claus
3 * I Yemvelo kuyona (mayelana Phuket.): Incazelo ye-ehhotela, izilinganiso
Ipaki-hotel "Romanov", Yevpatoria: ukubuyekezwa kanye incazelo
Inhlanzeko obuseduze nomfana osanda kuzalwa
Pokemon Hamba: indlela ukudlala, iziqondiso, imiyalo
Imikhawulo Dry yokwelashwa izinwele
Manual kanye othomathikhi kulungiselelwa intanethi kusuka "Kyivstar"
Metressa - Iyini? Medicine "Metressa"